Hamro Kantipur | पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने रावलको घोषणा: 'हार्ने–जित्ने चिन्तै नगर्नुस्, ओलीले पनि हारेकै हुन्' पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने रावलको घोषणा: 'हार्ने–जित्ने चिन्तै नगर्नुस्, ओलीले पनि हारेकै हुन्'
पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने रावलको घोषणा: ‘हार्ने–जित्ने चिन्तै नगर्नुस्, ओलीले पनि हारेकै हुन्’
काठमाडौं, चितवनमा हुने दशौँ महाधिवेशन (१०–१२ मंसिर)बाट निर्विकल्प अध्यक्षमा दोहोरिने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तयारीलाई उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेर चुनौती दिएका छन् ।
एमाले देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका वेला उपाध्यक्ष रावलले गृहजिल्ला अछाम पुगेर मंगलबार अध्यक्षको दाबेदारी घोषणा गरेका छन् । शक्ति बाँडफाँडमा नाटकीय सहमति नभए ओली निर्विरोध अध्यक्ष हुनेछैनन् ।
अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामार्फत रावलले ओलीसँगै अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि ओलीले पनि अध्यक्ष लड्ने घोषणा अझै गरेका छैनन् । महाधिवेशनका लागि अध्यक्षको दाबेदारी घोषणा गर्ने रावल पहिलो नेता हुन् । एमालेको संस्थापन पक्ष एकताका सन्देश दिन सर्वसम्मत नेतृत्वको कोसिसमा छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि निर्विरोध अध्यक्ष सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
एमालेले २७ कात्तिकमा देशभर एक हजार नौ सय ९९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दै छ । त्यसका लागि देशभरका जिल्ला कमिटीले तयारी थालेका छन् भने केन्द्रीय कार्यालयमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल प्रमुख रहेको संगठन विभागले सदस्यता नवीकरणको कामलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । केन्द्रीय कार्यालयले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको मापदण्डसमेत उल्लेख गरेर चौधौँ अन्तरपार्टी निर्देशन पठाइसकेको छ ।
अध्यक्षमा उठ्ने घोषणाअघि रावलले ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा हारको परिणाम आफूलाई स्वीकार्य हुनेसमेत प्रस्ट्याएका छन् । ‘कतिपय साथीहरूले दशौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा तपाईं केमा उठ्नुहुन्छ भन्दै खुल्दुली व्यक्त गरिरहनुभएको छ । मैले त्यसमा दुईवटा उत्तर दिने गरेको छु । पहिलो, तपाईंहरू जेमा उठ् भन्नुहुन्छ म त्यहीमा उठ्छु । तपाईंहरूको पनि यहाँ केही छ भने भनिहाल्नुस्… (हलको जवाफ– अध्यक्ष) । तपाईंहरूको प्रस्तावै रहेछ । एउटा त्यो भनेको छु ।’ अध्यक्ष उठ्ने तयारीलाई कार्यकर्ता भेलाबाट अनुमोदन गराउँदै रावलले भनेका छन् ।
ओली पनि आठौँ महाधिवेशनमा पराजित भएर अध्यक्ष भएको प्रसंग स्मरण गर्दै रावलले आफूलाई जस्तोसुकै चुनावी परिणाम पनि स्वीकार्य भएको प्रस्ट्याएका छन् । उनले त्यतिवेला ओलीकै प्यानलमा आफू उपाध्यक्षमा पराजित भएकोसमेत स्मरण गरेका छन् ।
‘कति कार्यकर्ताले सोध्नुभएको छ, हार्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? मैले भनेको छु, चुनावमा लडेपछि नहारेको को छ ? आठौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीले हार्नुभएको होइन ? त्यो महाधिवेशनमा केपी ओली र म एउटै प्यानलमा थियौँ, उहाँले अध्यक्षमा र मैले उपाध्यक्षमा हारेको हो,’ रावलले भने, ‘अब चुनावको कुरा गरौँ, केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा झापामा हार्नुभएको छैन ? म पनि त्यतिवेला संविधानसभाकै चुनावमा हारेको हुँ । दुवैले हारेका थियौँ, माधव नेपालले काठमाडौंमा हार्नुभएको थिएन र ? मुख्य कुरा देशको लागि, जनताको लागि, न्यायका लागि, समानताका लागि, सिद्धान्तका लागि झन्डा बलियो गरी समात्छ कि समात्दैन भन्ने हो । हार्ने कुरा के भो र ? यही ठाउँमा ०४८ मा हारेको हुँ, तर तपाईंहरूले जिताएर प्रतिनिधिसभा सदस्य, देशको उपप्रधानमन्त्री बनाइदिनुभो । त्यसकारण दशौँ महाधिवेशनमा तपाईंहरूको स्वाभिमान र भावनाको झन्डालाई बलियो गरी समात्छु, हार्ने–जित्ने कुराको चिन्तै नगर्नुस् ।’ नयाँ पत्रिकाबाट